हाम्रो बारेमा - गोल्डन लेजर
लेजर मेशिन निर्माताको विश्व प्रसिद्ध ब्रान्ड।
तपाईंको विशिष्ट अनुप्रयोग उद्योगको लागि परिष्कृत अनुकूलन क्षमता।
वुहान गोल्डन लेजर कं, लि।२०० 2005 मा स्थापना भएको हो र २०११ मा शेन्जेन स्टक एक्सचेन्जको ग्रोथ इन्टरप्राइज मार्केटमा सूचीबद्ध गरिएको थियो। यो डिजिटल लेजर टेक्नोलोजी अनुप्रयोग समाधान प्रदायक हो र विश्वव्यापी प्रयोगकर्ताहरूका लागि लेजर मेशिन र समाधानहरू उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ।
१० बर्ष भन्दा बढि निरन्तर विकास र नवीनता पछि, गोल्डन लेजर लेजर उपकरणको चीनको अग्रणी र विश्व प्रसिद्ध निर्माता बन्यो। उच्च-अन्त डिजिटल लेजर उपकरण निर्माणको क्षेत्रमा गोल्डन लेजरले आफ्नो अग्रणी टेक्नोलोजी र ब्रान्ड सुविधाहरू स्थापना गरेको छ। विशेष गरी कपडा, कपडा र औद्योगिक लचिलो कपडा लेजर अनुप्रयोगको क्षेत्रमा, गोल्डन लेजर चीनको अग्रणी ब्रान्ड बन्यो।
GOLDEN LASER is specialized in the R&D, production and marketing of CO2 लेजर , galvanometer laser machine र फाइबर लेजर काट्ने मेसिन. The product line covers more than 100 models such as flatbed CO2 laser cutting machine, vision laser cutting machine with camera, Galvo laser machine, label laser die cutting machine, fiber laser cutter for metal, and tube laser cutting machine.
अनुप्रयोगहरूमा डिजिटल प्रिन्टि,, कपडा, कपडा, छाला जुत्ता, औद्योगिक कपडा, फर्निचर, विज्ञापन, प्रिन्टिंग र प्याकेजिंग, फर्नीचर, सजावट, धातु प्रसंस्करण र अन्य धेरै उद्योगहरू सामेल छन्। धेरै उत्पादनहरू र प्रविधिहरूले राष्ट्रिय पेटन्टहरू र सफ्टवेयर प्रतिलिपि अधिकारहरू प्राप्त गरेका छन्, र सीई र एफडीए स्वीकृति छन।
स्मार्ट कारखाना बौद्धिक कार्यशाला
पछिल्ला दशकहरु, गोल्डन लेजर बुद्धिमान उत्पादन को बजार माग को लागी सकारात्मक जवाफ दिए। उद्योगको आन्तरिक स्रोतहरू एकीकृत गर्नुहोस्, र बुद्धिमानी कार्यशाला व्यवस्थापन समाधानहरू सिर्जना गर्न सूचना प्रविधिलाई मिलाउनुहोस्। बुद्धिमान उत्पादन प्राप्त गर्ने समयमा, यसले तपाईंलाई वास्तविक समय उत्पादन डाटा ट्रेस क्षमता, वास्तविक समय परिवर्तन गर्ने, वास्तविक समय अनुगमनको सुविधा पनि दिन्छ, बिस्तारै मानव हस्तक्षेपलाई कम गर्दछ जबकि उत्पादको गुणस्तर र वितरण समय सुधार गर्दछ, थप सुविधा प्रबन्धन ल्याउँदछ।
2000 को वर्ष SINCE
R० आर एंड डी
विदेशी बजारहरूमा गोल्डन लेजरले विश्वभरका १०० भन्दा बढी देशहरू र क्षेत्रहरूमा परिपक्व मार्केटि। सेवा नेटवर्क स्थापना गरेको छ।
गोल्डन लेजर चीनमा लेजर उत्पादनहरूको सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता भएको छ।